AutoCAD 2011 [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲများအကြောင်း ဆွေးနွေးချက်များ > Sticky---------ဖတ်ပေးပါ.. > AutoCAD > AutoCAD 2011
View Full Version : AutoCAD 2011
အော်တိုကဒ်၂၀၁၀ မှာတောင် နားမလည်သေးတာတွေ မသုံးတတ်သေးတာတွေ ခုမှ ကြိုးစားပမ်းစား လေ့လာနေတဲ့ အချိန်မှာ အော်တိုကဒ်က ဆရာသမားတွေကလည်း ဆရာဂုဏ် သမားဂုဏ် ပြတဲ့ အနေနဲ့ အော်တိုကဒ် ၂၀၁၁ ဆိုတာကြီးကို လာပြနေကြပီ။ တောင်းပန်ပါတယ် ဆရာတို့ရယ် နည်းနည်းလောက် ရှော့ပါဦး လို့တောင် တောင်းပန်လိုက်ချင်မိပါရဲ့။ ကဲလေ ..... သူတို့ကတောင် ဒီလောက် ပေးနေမှ တော့ ကိုယ်လည်း တစ်စေ့တစ်စောင်း အကဲဖမ်းကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
မြင်လိုက်တာနဲ့ ဆွဲဆောင်အား ပြည့်တဲ့ အပြင်အဆင်နဲ့ ဖမ်းစားထားတာပဲ စစ်ရေ...
Ribbon တွေ Visual Style တွေက စလို့ Layer တွေအလယ် Object တွေ Create လုပ်တာတွေအဆုံး user တွေ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင် ပြင်ပေးထားပုံပဲ.....
အထူးသဖြင့် Mesh Object ပိုင်းမှာပေါ့.....။
ဟူး... သူက ပြေးလိုက်.. ကိုယ်က လိုက်လေ့လာလိုက်နဲ့က မဆုံးတော့ဖူးနော်....။ :)
စတင်အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်တဲ့သူတွေရဲ့ အကောင်းအဆိုး ဝေဖန်ချက်တွေနဲ့ နောက် အသစ်ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ AutoCAD tips တွေအကြောင်း လေ့လာချင်သေးပါရဲ့...
ကဲ စမ်းချင်တဲ့သူတွေစမ်း လို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
စကားဝှက်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း အမ်အီးအက်ဖ် အကြီးစားလုံးသုံးလုံးဖြစ်ပါတယ်။
Autodesk Product ကို install လုပ်ပါ။
စီရီရယ် နံပါတ်ကို အောက်ပါတို့အနက်မှ ကြိုက်ရာတစ်ခုကိုသုံးပါ။
Product Key: 185C1
(၁) ။ အင်စတော ပြီးလျှင် အော်တိုကဒ်ကိုဖွင့်ပါ။
(၂) ။ Activate ကိုရွေးပါ။ activation screen ပေါ်လာလျှင် ကီးဂျန် 32bits or 64bits version ကိုဖွင့်ပါ.
(၃) ။ Mem Patch ကို ကလစ်ပါ။ (succeeded ဖြစ်သွားတာကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။)
(၄) ။ request ကုဒ် ကို Copy လုပ်ပြီး ကီးဂျန်တွင်ထည့်ကာ generateလုပ်ပါ။
(၅) ။ Activation ကုဒ်ကို ကော်ပီလုပ်ပြီး Activation screen မှာ ထည့်ပါ။ Next ကိုနှိပ်ပါ။
ဒါဆိုရပါပြီလို့ ထင်တာပဲ။။ :4: :4: :4:
ခရက်ဗားရှင်းတွေ က မြန်လှချည်လား... ???
autodesk ကဘဲ ပြန်ထုတ်နေသလားတောင် အောက်မေ့မိတယ်... ဒီ စီရီရယ် နံပါတ်တွေ ရော လုပ်ပုံ လုပ်နည်းတွေရော သူတို့ မသိစရာ အကြောင်းမရှိဘူး... ကြာလှနေပြီ...
ကျနော့် စက်ထဲတော့ autodesk ရဲ့ software ၄/၅ ခု (တချို့ဟာတွေက ခရက်ဗားရှင်း ရှာမရတာနဲ့ student version တွေ) ထည့်လိုက်တာ ခရက် ဗားရှင်း သွင်းလို့ မရတော့ဘူး... တချို့ file တွေက share သုံးတာ ဆိုတော့ အကုန် ဖြုတ်ချပြီးမှ ပြန်သွင်းလို့ ရမဲ့ သဘောရှိတယ်..
anyway ကျေှးဇူးပါ ကိုထွန်းအောင်ကျော်...
ဒီမှာ ဒေါင်းဖို့ links တွေပါ..ကျွန်တော် text file လေး attach လုပ်ပေးထားပါတယ်.
အထဲမှာ rapidshare , hotfile &amp; ul.to အတွက် download လင့်တွေပါ..
32 ဘစ်အတွက်ရော 64 ဘစ် တစ်ဖိုင်စီ ခွဲထားပါယ်...
ERROR ဖြစ်နေတယ်ဗျ။ ဘာလိုနေလဲ မသိဘူးနော်။ ရက်ပစ်က ဖရီး အကောင့် လုပ်ရသေးလား မသိ။
ဟောဒီလင့်ကလဲ အကောင့် လုပ်ရသေးလား မသိ။ http://ifile.it/dl
မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ ကျွန်တော် အခု download လုပ်နေပါတယ် ..rapidshare နဲ့ပါ..
သူက premium account နဲ့မှ အဆင်ပြေမှာပါ....ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ယောက် ကို
နောက် ifile ကလဲ ကျွန်တော် ဒေါင်းတာ ရပါတယ်ခင်ဗျာ...အခုပဲဒေါင်းလိုက်တာပါ။
သူက request ticket download နှိပ်ရပါသေးတယ်...
လုပ်ကြည့်ပါဦး..ကျွန်တော် လုပ်ပြီးအခု attach လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ဒါပေမယ့် လုပ်တတ်သွားအောင်စမ်းကြည့်ပါဦး .. :)
autocad ၂၀၁၁ နဲ့ပတ်သတ်ပြီး autodesk web site မှာ 3d ပိုင်းလေးတွေကို
အခြေခံနဲ့ နဲနဲပိုကောင်းတာလေးတွေကို pdf နဲ့တစ်ကွ simple files တွေပါ down ပြီး
သင်ခန်းစာ ၄ ခုစာကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
Autodesk AutoCAD 2011 Final လေး ထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒေါင်းလော့အဆင်ပြေအောင် mediafire နဲ့ တင်ပေးထားပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ 32 bit window ရော၊ 64 bit window ရော နှစ်ခု စလုံးအတွက် တင်ပေးထားပါတယ်။
အသုံးတည့်မယ့်သူများ ယူသုံးကြပါခင်ဗျာ။ :) :)
Autodesk AutoCAD 2011 Final [32Bit]
Autodesk AutoCAD 2011 Final [64Bit]
(လူတယောက်တွင် သခင် တယောက်သာ ရှိရမည်။)
ကျွန်တော် Autodesk AutoCAD 2011 Final [32Bit] ကို ၁၈ ပိုင်းလုံး download လုပ်ပြီး
file ဖြည်လိုက်တာ iso file တစ်ခု ရပေမယ့် install လုပ်လို့မရပါဘူး ............
iso ဖိုင်ကိုဖွင့်လို့မရတာလား။ သူ့ကိုဖွင့်ဖို့အတွက် Software လိုပါမယ်။
ဒါမှမဟုတ် Install လုပ်တာမှာ ခရက်ဖြေလို့မရတာလားဗျာ။
ISO ဆိုတာကိုက ချုံ့  ထားတဲ့ ဖိုင်တစ်မျိူးပဲ...နောက်တစ်ခါထပ်ဖြည်ရမယ် အဲဒီဟာကို...winrar ရှိရင် ကို ရမယ်ထင်တယ်ဗျ....အဲဒီ ISO file ကိုပဲ select လုပ်ပြီး right click ကနေ extract ပေါ်တယ်ဆိုရင် ..နှိပ်လိုက်ပါ..
ok ပါလိမ့်မယ်.. :)
ကျွန်တော် file တွေ အားလုံးကို select လုပ်ပြီး
7-zip နဲ့ဖြည်တာပါ ............. ဖြည်ရင်းနဲ့error တက်ပြီး
iso file တစ်ခုတော့ ထွက်လာပါတယ် .............
ထွက်လာတဲ့ iso file ကို mount လုပ်ပြီး install လုပ်တာ မရဘူး .......
ကျွန်တော့်အထင်တော့ ဖြည်ကတည်းက error ဖြစ်လို့ထွက်လာတဲ့
iso file ကို mount လုပ်ပြီး install လို့မရတာလားမသိဘူး ........
ဘယ်လို ဆက်လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပြပေးပါ ......
file တွေ အားလုံးကို မိုးလင်းပေါက် download ဆွဲထားရလို့လွယ်လွယ်နဲ့ တော့ အလျော့မပေးချင်သေးဘူး ......
အဲဒါလေးကို မရှင်းဘူးဗျ..ကျွန်တော် အထက်မှာ ဖြေပေးထားသလိုမလုပ်ဘူးလားဗျာ.. :)
ISO file ကို install လုပ်လို့မရဘူးလေ..ထပ်ပြီး winrar နဲ့ပဲ ဖြည်(exract) လုပ်ရဦးမှာလေ..
တစ်ကယ်လို့မရဘူးဆိုရင်..winrar setting ထဲမှာ ISO file ကို check ပေးလိုက်ပါ..
မရှင်းသေးရင် ဒီမှာ သေချာ ထပ်လေ့လာပါ..http://techie-buzz.com/tips-and-tricks/how-to-open-iso-file.html
အကို ရေ..ကျွန်တော် သိတာလေး ပြောချင်လို့ ပါ..
အကိုဒေါင်းလိုက်တဲ့ဖိုင်တွေက ဇစ် ဖိုင်တွေ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်..
အယ်ရာတတ်တယ်..ဆိုရင် ဖြေထားတဲ့ဖိုင်နဲ့ ဒေါင်းထားတဲ့ဖိုင် ဆိုဒ် တွေ ကို တစ်ချက် စစ်ကြည့်ပါ..
သိပ်မကွာဘူး ဆိုရင်တော့ ရပါတယ်..
၂ အိုင် အက်စ် အို ထွက်လာမယ် ..
အိုင်အက်စ် အို ဆိုတာလည်း ဇစ် တစ်မျိုး ပါပဲ ..
openwith မှာသွားပြီ..7zip or winrar တစ်မျိုး မျိုး နဲ့ဖြေချလိုက်ပါ..
၃ ဖြေလိုက်ရင် ဖိုင်တစ်ခုထဲ ဖြေ လိုက်ပြီး .. အဲဒီထဲ မှာ setup တစ်ခု ပါလာပါလိမ့်မယ်..
အဲဒါ ကို double click နဲ့ run လိုက်ပါ.. စီရီရယ်.. ကလဲ အထဲ မှာ ပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်..
အဆင်ပြေ သွားပါပြီး ခင်ဗျား......
အခုလို ကူညီပေးကြတဲ့ အတွက်
What inside's Autocad 2011: Background Color
နှစ်တစ်နှစ်ဟောင်းလို့ နှစ်တစ်နှစ်ဆီသို့ အသွင်ကူးပြောင်းပါတော့မယ်။ ၂၀၁၀ ကုန်လို့ ၂၀၁၁ ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ အော်တိုကဒ် ၂၀၁၁ မှာလည်း ဘယ်လို အသွင်သစ်တွေ ပါဝင်လာတယ် ဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်နော်။
Version တစ်ခုကနေ တစ်ခုပြောင်းတိုင်း အသွင်တစ်မျိုးဆီဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ AutoCAD ဟာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် မရိုးရလေအောင် လေ့လာစရာတွေ တိုးတိုးလာပါတယ်။
အခုထပ်မံတိုးတက်လာတဲ့ အော်တိုကဒ် ၂၀၁၁ မှာတော့ New Command ( ၈၆ )ခုနဲ့ New System Variable ( ၈၉ ) ကို ထပ်မံဖြည့်တင်းထားတ်ာလို့ Autodesk က ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်ကိုတိုင် မတီထွင် မဖန်တီးနိုင်သေးပေးမယ့် သူများတွေက ဘာတွေအသစ်ဖန်တီးနေတယ် ဘယ်လိုတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာကိုတော့ မျက်ခြေမပြတ် လေ့လာသင့်တယ်လို့ ကျမထင်မြင်မိပါတယ်။
အော်တိုကဒ် ၂၀၁၁ ကိုစတင်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ပထမဦးဆုံး သတိထားမိတာက Workspace Area ရဲ့ နောက်ခံ Background Color ကိုပါ။ Autocad 2009 အထိ Autodesk က နောက်ခံအရောင် Default Color ကို အဖြူရောင် သုံးခဲ့ပေမယ့် Autocad 2010 မှာ Pale Yellow ကိုသုံးခဲ့ပြီး Autocad 2011 ကစတင်လို့ Dark Blue (RGB = 33,40,48 )ကိုပြောင်းလဲ အသုံးပြုလိုက်ပါတယ်။ ခုချိန်ထိ အမည်းရောင်ကိုသာ ကျမ တစ်စိုက်မတ်မတ် အသုံးပြုခဲ့ပေမယ့် အော်တိုကဒ် ၂၀၁၁ ကနောက်ခံအရောင်လေးကိုမြင်တော့ သဘောကျမပြန်ပါတယ်။ လူဆိုတဲ့ အမျိုးကလည်း အသစ်မြင် အဟောင်းမေ့တတ်တဲ့ အကျင့်လေးကလည်း ရှိနေပြန်တယ်လေ။
ကဲသူဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ အရောင်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ထုံးစံအတိုင်း Background Color ကိုမိမိသုံးနေကြအရောင်အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ခုဒီပို့ကတော့ Autocad 2011 မှာဘာတွေထပ်တိုးလာတယ် ဘာတွေထူးခြားလာတယ်ဆိုတာ ရေးဖို့ Intro လုပ်လိုက်တဲ့ ပို့လေးပါပဲ။
ကျန်တာတွေတော့ မကြာမီ လာမည် .. မျှော်ပေါ့နော်
အော်တိုကဒ် ၂၀၁၁ မှာ သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အရာတွေထဲကမှ ပထမဦးဆုံးသတိပြုမိတာကတော့ Grid တွေပါပဲ။ ကျမတို့အမြဲတစ်စေ တွေ့မြင်ခဲ့ဖူးတာက Dot လေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Grid တွေပါ။ ဒါပေမယ့် အော်တိုကဒ် ၂၀၁၁ မှာတော့ Grid လေးတွေဟာ မျဉ်းကြောင်းလေးတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ Default Setting မှာတင် Grid ကို Turn On လုပ်ထားတာကိုလည်း သတိထားမိပါတယ်။ Model Space မှာတင် သာမကပဲ Layout Space မှာပါ Model Space မှ Gridline လေးတွေကို မြင်နေရတာ တစ်မျိုး ချစ်စရာကောင်းနေပြန်ပါတယ်။ ဒီလောက်နဲ့ မလုံလောက်ဘူးဆိုရင်လည်း Layout Space မှာ Grid ကို ထပ်မံ ON ပြီး Grid နှစ်ထပ်နဲ့ ပုံဆွဲနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် USC Icon လေးနားမှာ လမ်းညွှန်အဖြစ် Axis လေးနှစ်ခု အပိုပါလာပါတယ်။
I had installed autocad 2011 trail version and then I uninstalled.Because of I had autocad 2009 full crack version.But when I extract with rar,in the crack file there is no keygen.only have install document notepad file.But when I extract this in other computer,it is all ok.So,I copied this keygen and put in my computer,but it was automatically deleated by computer.I think it may be because of antivirus software,so I unactivate it.But it can't.Can I do theTrail version to full version by using crack file? So,please help me!How should I do?My computer is 64bit version.with many hope for answer....zawphyoaung
ps.....I am writing with english is I cannot type myanmar font.sorry,,,I will try later...
ကျနော် ဒီအောက်ကကောင်လေးမှာ မြန်မာလို ဘယ်လိုရိုက်လို့ ရတယ်ဆိုတာလေး အရင် ဝေမျှခွင့်ပေးပါ
Dear Ko PhoTar
Sorry for typing in English,because I can not find the Myanmar Key Pad.
ကျနော် အောက်မှာ မြန်မာ ကီးဘုတ် ရှိတဲ့ နေရာကို ပြထားပေးပါတယ်
အဲဒီကောင်ကို ထောက်လိုက်ရင် ဒီလိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
နောက်ကျနော် သိသလောက်က ခရက် ဖိုင် မရှိပါဘူး အဲဒီလိုပဲ ကီးဂျင်နဲ့ အားပေးရတာပါ အကြံ ပေးကြည့်ချင်ပါတယ် အကို့ anitvirus ကို အရင် disable လုပ်ပြီးမှ ကီးဂျင်ကို အကိုစက်ထဲ ကူးပြီး စမ်းကြည့်ပါ